नायिकाहरुको जाडो के ले खान्छ ? – नेपालि भिडियो ब्लग, पहिलो र एक मात्र
काठमाण्डौमा अहिले जाडो ह्वात्तै बढेको छ। हुन त पौष महिनामा यसरि जाडो बढ्छ भन्ने कुरा अभिनेत्रिहरुलाइ थाहा नभएको पनि होइन, त्यसमाथि बेलुकिको समयमा भएको कार्यक्रममा पनि उनिहरुले ठुलै जोखिम मोलेको बुझ्न सकिन्छ । सो कार्यक्रममा पुरुषहरु न्यानो लुगामा उपस्थित भए पनि कार्यक्रममा सहभागि हुने अधिकांश नायिकाको पहिरन भने जाडो छेक्ने खालको थिएन । त्यसमा पनि उल्लेख्य अभिनेत्रिहरुको कुरा गर्दा अभिनेत्रिहरु नम्रता सापकोटा, आश्मा डीसी, अशिष्मा नकर्मी, छुल्ठिम गुरुङ, निता ढुंगाना आदिको पहिरनले बढि नै खुल्ला थियो । सारिमा सजिएका अभिनेत्रिहरुमामा अनु शाह, नीता ढुंगाना, रेजिना उप्रेती लगायत थिए भने करिश्मा मानन्धर सधै जस्तै सुन्दर देखिएकि थिइन ।
यि अभिनेत्रिहरुको जाडो के ले खायो होला भन्ने थाहा हुनेले कमेन्टमा लेख्नुहोला ।
← ऋषि धमलाको पार्टिमा पुर्वप्रधानमन्त्रि, सभामुखदेखि सेनापतिसम्म, बोलाउनु गैरकानुनि?
भुपि शेरचनको अप्रकाशित कविता र भुपि परिचय →